Beka Ubuso Bakho Ekukhanyeni | Martech Zone
Beka Ubuso Bakho Ekukhanyeni
NgoLwesine, Septhemba 13, 2012 NgoLwesine, Septhemba 13, 2012 Douglas Karr
Abantu bavame ukukhohlwa izinombolo zocingo, ama-logo, amagama nama-URL… kepha abakhohlwa ubuso ngokujwayelekile. Kungakho sincoma ukuthi wonke amakhasimende ethu athole ubuso bawo laphaya! Ngokuya ngokwanda, ubukhona bethu emphakathini, okuthunyelwe kwethu kubhulogi kanye nemiphumela yethu yosesho seziqala ukukhombisa ubuso. Ubuso obunobungane buyisango eliduduzayo lokuthola amathemba phambi kwakho futhi akufanele kubukelwe phansi.
Ngithembe, angibeki umug wami omkhulu kuyo yonke indawo ngoba ngiyazithanda. Ngikwenza ukuze abantu baqhubeke nokungibona. Ngakho… lahla konke bese wenza okulandelayo:
Thola umthwebuli zithombe omkhulu - ungashiyi isithombe sakho kukhamera ye-iPhone noma kwi-laptop yakho… umthwebuli zithombe omkhulu uzosetha ukukhanyisa, futhi akunikeze isithombe sokujula esifana nobuntu bakho. Siyathanda UPaul D'Andrea sebenza! Thembela ukwahlulela kwabo ekuhlelweni nasendaweni enhle!
Bhalisela i I-Gravatar i-akhawunti - layisha isithombe sakho, engeza futhi uqinisekise wonke amakheli akho e-imeyili. IGravatar isetshenziswa yizinhlelo eziningi zokuphawula ngaphezu kweWordPress (engumnikazi wesikhulumi) futhi ihlonishwa umhlaba wonke. Manje ubuso bakho buzobonisa ngokungaguquki noma ngabe ukuphawula noma kuphrofayela ye-WordPress.
Bhalisela Google - Uma ungeza amasayithi onikela kuwo kuphrofayili yakho ye-Google +, isithombe sakho sizobonakala nakumiphumela yosesho uma ukumakwa kobunikazi kungaphakathi kwesayithi (iningi lamapulatifomu wokubloga akusebenzisile lokhu). Kwesinye isikhathi i-Google + ibonisa isithombe sakho ngaphandle komaki, futhi!
Gcwalisa iphrofayili yakho ye-WordPress - ama-plugins amahle afana I-plugin ye-Yoast's WordPress SEO engeza izinkambu ukubeka iphrofayela yakho ye-Google +, uhlinzeka ngemakhaphu edingekayo ukuze isithombe sakho siboniswe emiphumeleni yosesho.
Zama ukugcina izithombe zakho kuyavumelana kuwo wonke amaphrofayili wakho wenethiwekhi yokuxhumana nabantu. Lapho othile eqala ukubona ubuso bakho kumazwana ebhulogi, bese ku-Facebook, naku-Twitter, maningi amathuba okuthi abe ngumlandeli, umlandeli noma ikhasimende! Ngiye ngathola abantu beza kimi bevela eParis beya eSan Francisco abangibona ngesithombe sami… kukhokhelwa izinzuzo!
Njengochwepheshe esikhaleni, ngingahle ngincome ngokumelene namakhathuni (ngaphandle kokuthi ungumdwebi wekhathuni) noma esinye isithombe. Ngaphandle kokuthi banesifo esingajwayelekile esaziwa njenge prosopagnosia, abantu babona ubuso kangcono kakhulu kunalokho abakhumbula eminye imininingwane mayelana nebhizinisi lakho noma imikhiqizo nezinsizakalo zakho.
I-PS: Lokhu okuthunyelwe kwebhulogi kugqugquzelwe umphathi wethu wephrojekthi, UJenn Lisak, ukuthumela i-imeyili enhle kwiklayenti elichaza okufanayo!
May 13, 2016 ku-1: 18 PM
Okuthunyelwe okuhle. Njengoba sazi ukuthi wonke umuntu uhlukile ngakho ukubukeka komuntu ngamunye kungumehluko.